Mitambo mitsva yevhiki paApp Store | IPhone nhau
Unoda kutamba here? Zvakanaka vhiki ino mitambo yakawanda inonakidza yauya kuApp Store. Pazasi isu tinokupa iwe nesarudzo yemakumi matatu nemana emitambo yakanakisa yasvika kuchitoro chekushandisa cheIOS mumazuva apfuura. Semazuva ese, mazhinji emitambo iyi mahara nekutenga kwe-mu-app kana kushambadza, kunozivikanwa se "freemium", asi kune mimwe mitambo yakabhadharwa inotivimbisa (tinofanira) kuti tichazongobhadhara kamwe chete uye kunakirwa zita rakazara zvakakwana.
Kubva pane inotevera rondedzero ndaizoratidzira akati wandei mitambo, asi pane imwe yandakatamba mune yayo yapfuura vhezheni kwemaawa: Stickman Nhabvu 2016. Stickman mitambo haisi yekuti vane mifananidzo inoshamisa, asi inowanzo kuve inonakidza kwazvo. Uye zvakare, kutamba kuri mahara, asi isu tichafanirwa kuona kushambadzira mune yakazara skrini, semuenzaniso, pakati pemitambo nguva, kushambadza kwatinogona kubvisa nekutenga kwakabatana.
Kuti nditaure nezvemimwe mitambo inotonhorera, ini ndaizotaurawo Sky Royal: Simuka, zita mune yakachena RPG maitiro ane mutengo we € 0.99, iyo isiri yakawanda kana tichifunga nezve mutengo watinowana mimwe mitambo yakafanana. Mumwe mutambo mune yakachena RPG maitiro ndiro idzva basa reDotEmu, Titan Kutsvaga, asi iyi yatove nemutengo wepamusoro we € 6.99. Uye kana iwe uchida mitambo yemijaho yemota asi uchisarudza kubva kumatunhu easphalt, vhiki ino yasvika kuApp Store Rush dziite 2, zita rinondiyeuchidza zvishoma nezveColin McRae Rally iyo yandakatamba makore apfuura pane yekutanga PlayStation. Mumwe mujaho uyo zvakare unoita seunonakidza, uyu wemahara, iCosmic Dambudziko, asi uyu uri wemijaho yemuchadenga. Iyo nyeredzi shanu yainayo muApp Store inoratidza kuti mutambo unonakidza kwazvo. Tinokusiya uine runyorwa rwakakwana.
Mitambo mitsva svondo rino
Pinball Mupiki - GameClubvakasununguka
Britney Spears: American Kurotavakasununguka
Mr. Crab 2vakasununguka
Cosmic Dambudziko Mujahovakasununguka
Kunyanyisa Forklifting 2vakasununguka
Stickman Nhabvu 2016vakasununguka
Mandie Manzano chirabwevakasununguka
Rush dziite 21,09 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mitambo mitsva yevhiki paApp Store: Mr Crab 2, Vhura Tap Tennis uye zvimwe zvakawanda
Mifananidzo yekutanga yeiyo iPhone 7 yakaburitswa ... izvo manyepo